Rio 2016 is barbardhiga cabirka jirka - BBC News Somali
Rio 2016 is barbardhiga cabirka jirka
Browser-kaaga kuma shaqaynayo Halkan ka fiiri sida ay BBC u tabinayso Rio 2016
Jirkaaga sidee ula mid yahay kan cayaaraha Olombigga?
Tafaasiishaada gali halkan hoose si aad u ogaato sida aad jir ahaan ula mid tahay cayaartoyda ka badan 10,000 ee Olombigga ka qayb qaadanaya ee database-keenna ku jira
cm Cag Hiish
Maalin Bil Sannad
Is barbar dhig caraartoyda ah
Hel qof kuu dhigma
Marka hore dhererkaaga
Ciyaartooyga ugu gaaban ee jimnaasiamka Brazil waa Flavia Saraiva waana 1.33m. Cayaartoyga ugu dheer Rio 2016 waa Li Muhao, oo cayaara kubbadda kolayga, wuxuu dhererkiisu yahay 2.18m. Celceliska dhererka cayaartoyda waa 1.77m.
Calaamad kasta waa 5cm
Marka labaad culayskaaga
Flavia Saraiva ayaa sidoo kale ah ciyaartoyda ugu fudud Rio, iyadoo cabirkeedu yahay 31 kg. Daniel Natea oo ciyaarta judo ayaa shan goor ka culus iyadoo ah 170kg. Celceliska culayska ciyaartoyda ayaa ah 72kg.
Calaamad kasta waa 5 kg
Cayaartoyga ugu da'da yar Rio waa dabaalyahanka Nepal ee Gaurika Singh oo 13 jir ah. Qofka ugu weyn waa Julie Broughman oo New zealand ka socota oo fardafuulka ku tartamaysa, waxayna ka qayb galaysaa olombigeedi ugu horreeyey ayadoo 62 jir ah. Celceliska da'da tartamayaasha Rio waa 26.
Calaamad kasta waa 1 sano
Ugu dambayntii seddexda cayaartoy ee kuugu sarreeya kuwa kula midka ah waa:
La mid ahaansho 1
La mid ahaansho 2
La mid ahaansho 3
Hel qof kale oo kula mid ah
Sidee loo sameeyey qiimaynta qofka kula midka ah
In ka badan 10,500 oo ciyaartooy oo ka mid ah 11,500 ee websiteka Olimbiga ayaa la isticmaalay.Ciyaartooyda qaar laguma darin,iyadoo dhererkooda,culayskooda iyo da'dooda aysan ku qornayn. Xogta waxaa laga keenay ODF waana sida saxda ah laga bilaabo 8 August.
Is barbardhigga xogtaada iyo tan xogta cayaartoyda ayaa la xisaabiyay ayadoo la adeegsanayo farsamooyin xisaabaad oo la yiraahdo Euclidean distance.
Waxay saamaxaysaa in la xisaabiyo farqiga u dhaxeeya qof istimaalaya websitekan iyo tan dhamaan cayaartoyda. Cayaartoyda uu farqigoodu ugu gaaban yahay marka loo eego qofka ayaa ka dib la barbar dhigaa dhererka iyo culayska qofka.
Haddii in ka badan seddex ciyaartoy ay isku mid yihiin qofka, ka dib waxaa la isticmaalaa tariikhda dhalashada si loo kala saaro.
Waxaa soo saaray Nassos Stylianou, John Walton iyo Nathan Mercer. Gorfaynta xogta waxaa sameeey Ransome Mpini, naqshadda waxaa sameeyey Gerry Fletcher waxaana horumariyey Luke Ewer iyo Chris Ashton. Hawl dheeraad ah waxaa qabtay Liam Bolton iyo Phil Dawkes